Aiza no mety mampiasa USB Hub eo amin'ny fiainana? | | OS-STORE BLOG
Septambra 7, 2019 ecommerce Electronics, fiainana, Products, teknolojia 0
Ny USB Hub dia fitaovana kely izay mampivelatra ny USB interface tsara ho maro USB Hub interfaces. it is powered usb hub fast charging port power adapter data hub with usb for macbook.
USB Hub Hub dia azo ampiasaina ho toy ny fitaovana USB finday kapila mafy, Flash USB, karatra mpamaky, finday, fakan-tsary nomerika, vahaolana avo fakan-tsary, fakan-tsary nomerika lahatsary sy multi-peo ny fantsona. Tsy manohana niara fifandraisana isan-karazany USB fitaovana haingam-pandeha. , miovaova fifindran'ny.
USB Hub tanteraka ny raharaham-barotra, ary isan'andro use.Can Travel mifandray mijery sarimihetsika amin'ny fahitalavitra na hizara ny fa mamaly ny seranan-tsambo ho an'ny namana sy ny fianakaviana, ary tsy ilaina ny hametraka mpamily-tsipiriany ary milalao mora ny hanitatra.
USB Hub dia Precautions Fa Use >>>
USB Hub nitondra anay tsy hanahirana,Nitombo solosaina manovaova,fa no ahafantaranao ny marina lalana hampiasa azy io?
Voalohany indrindra,rehefa mahazo USB Hub tsy afaka mampifandray avy hatrany be dia be ny fitaovana ,such as Mouse ,telefaonina,mpanao pirinty, charger, dia miteraka tena mafana akaikin'ny Jack, satria mamaly ny filàna ny telefaonina mitaky somary lehibe amin'izao fotoana izao,rehefa miara-miasa mihoatra ny iray hours.Some fitaovana io dia tsy mety.
Ary noho izany, tokony mihaino ny fampiasana matetika ny Hub, mitandrina ny mari-pana fanovana. Raha misy ara-dalàna,, tapaka ny fifandraisana.
A USB Hub dia tena na inona na inona mihoatra noho ny gizmo amin'ny USB fanampiny seranan-tsambo eo amboniny. Ianao-tsipiriany ny foiben'ny ao amin'ny solosaina findainy ny USB seranan-tsambo. Avy eo dia afaka roa na aiza na aiza-tsipiriany ny efatra ka hatramin'ny valo USB fitaovana ho ao an-Hub.
Mety toa tsy azo ampiharina, fa ny laptop afaka mahatratra 127 Fitaovana USB tia azy na oviana na nanome fotoana. Eny, indray mandeha. Izay no iray amin'ireo fanalahidin'ny ho any amin'ny seranan-tsambo ny expandability USB.
Misy fitaovana tsy azo mihazakazaka amin'ny hubs, toy ny sasany haingam-pandeha mafy aelin'ny. Raha izany, ny fitaovana tsy maintsy plugged mivantana eo an-solosaina ny USB seranan-tsambo. Aza tsy hirehitra ny fahatezeranao: Misy hafatra fampitandremana tonga ka hampianatra anao izay tokony hatao rehefa zavatra toy izany nitranga.
Misy karazany roa ny hubs: Powered sy unpowered. Ny Powered Hub dia tsy maintsy plugged in na misintona ny hery avy amin'ny solosaina. Powered hubs dia ilaina mba hanomezana fahefana bebe kokoa ny sasany fitaovana USB.
WIFI Wireless Technology combine with life, raharaham-barotra, studies
BroadCom BCM4360 BCM94360CD BCM94360CS WIFI Wireless WLAN Bluetooth Card mpamily sy Software Download
processors Series Driver Support 64-kely Windows Device Model Technology_Internet mpamily fanohanana teknolojia Intel Finday fandikana ara-dalàna Public Tanjona Unité centrale Nokia mpitantana Fitaovana Samsung HD Graphics HTC OS-STORE Processor Software
Intel Server Public Tanjona Samsung Galaxy fandikana ara-dalàna teknolojia Qualcomm mpamily fanohanana processors Nokia finday avo lenta Sony Ericsson Processor Software mpitantana Fitaovana Intel Finday Technology_Internet Device Model Samsung OS-STORE Series Driver Support HD Graphics HTC Unité centrale 64-kely Windows